Kutheni ndifanele ndixhase uphando lwentlalo yam yewebhu kunye nokuthengisa kwevidiyo ye-SEO?
Ngokuqhelekileyo kuthatha ixesha elide kunye nokusebenza ukuze ubone ukuba iimpawu zokuqala ze-SEO zihambisa iziphumo zokuqala. Indlela yokudala ukukhula okunamandla? Kufuneka ufumane isicwangciso sakho sokumisela ukucinga ngezinye izicwangciso zokwenza izibheno zombini nabaphulaphuli bokukhangela.Ngoko kutheni ungazami ezinye izicwangciso ze-SEO zokuthengisa ividiyo? Kubonakala ngathi inhlanganisela epheleleyo ukujongana nabathengi abangakumbi xa begcina nokuphuhlisa abalandeli bakho okanye abafundi bakho, akunjalo? Nangona kunjalo, ndiyakholwa le nkcazo elandelayo malunga nokusebenzisa i-SEO kunye nokuthengiswa kwevidiyo kuya kuba luncedo ekuqwalaseleni ngokufanelekileyo.
ukushiya kude emva kwemizamo ehlangeneyo yeBing kunye ne-Yahoo. Ingaba ithetha ntoni? Akukho nto, ngaphandle kokuba abantu bathanda ukubukela iividiyo - best long term care insurance policies. Ngoko, kutheni akufanele kube yinto ecacileyo yokungena emakhasini akho ewebhu kunye nomxholo onobomi okanye onokuzonwabisa? Akunjalo nje ngamava omsebenzisi onempilo, kodwa ukuguqulwa okukhulu. Ngokutsho koqikelelo olutshanje lwenzululwazi, ukusingatha umkhankaso ofanele we-imeyile, oxhaswa nge-SEO yokuthengisa ividiyo kunokunyusa abaphulaphuli bakho abanokuza ngokubhalisa nge-imeyile ngama-51%. Abantu bathi ukufaka iphepha lakho lokumisa ngevidiyo ebonakalayo libonakala liphinde lithembise, libe ne-2-fold increase in conversion. Njengoko sele kuthethwe ngaso, injongo ephambili ye-Injini Yokwenziwa kweeNjini yokuSebenza ngokwayo ukuqhubeka nokupompa ukuguqulwa okukhulu, ngelixa ufumana umgangatho okhokelayo. Yingakho ndiziva ndikhululekile ukufaka isicelo, ubuncinane iindlela zokuqala zokuthengisa i-SEO kwiminyaka emibili kakade, kwaye ngokuqinisekileyo awuzisoli nakanjani.
Yenza ubukho obunzulu kwi-inthanethi
Phakathi kweenjongo ezibalulekileyo zexesha elide ze-SEO kugcina nokwenza amandla egunyaziso lakho negama lakho, kunye nokuqonda kwamakhasimende akho Internet. Ngale ndlela, ukujongana ne-SEO yokuthengisa i-video kunokunceda ukuqinisa izikhundla zakho zangoku. Ukuba nomxholo omkhulu wevidiyo okhangelekileyo kubathengi abatyebileyo kuthetha ukuba iwebhusayithi yakho iba yinkokheli kwi-niche yakho yemarike, inika ulwazi oluthe luncedo kwaye luhlale lufanelekileyo, kunye nokuphendula imibuzo edla ngokubanzi yabasebenzisi. Zonke eziya kuguqula iindwendwe zakho ngezinye iinkcukacha zibe ngabalandeli abazinikeleyo, kungekhona ukuthetha abathengi bangempela.
Abanikazi bezoshishino balwa niches okanye abantu abajoliswe kuyo, ngoko ke ukubheja ngokufana kakhulu, kungekhona ukuthetha amagama athile kunye namagama abalulekileyo. Kodwa ngoku iimpembelelo ezandayo zequlatho yevidiyo yenza ukuba kuboniswe phezulu kwi-SERPs, ukulandelana ngesandla kunye nesicatshulwa sokuqala. Yingakho ungalokothi uphelelwe eli thuba elihle kakhulu ukubetha ngokukhawuleza abachasi bakho, ubuncinci abo bafumana ngaphandle kokuthengisa kwe-SEO yevidiyo. Hlala uhlawule ixesha kunye nemizamo yevidiyo ekhethekileyo neyigugu, kungekhona kweso sikhundla seblogi okanye kwi-infographic oya kuzisa kule veki, umzekelo.